Hiriirri bilisummaa babal'ataa fi hiddaan lafa qabataa deemaa jira - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Hiriirri bilisummaa babal’ataa fi hiddaan lafa qabataa deemaa jira
Hiriirri bilisummaa babal’ataa fi hiddaan lafa qabataa deemaa jira
Ajjeechaa fi doorsisaan ummata kan jilbiiffachiisu, gaafii haqaa isaan kan gachisiisu hin taane
Sochiin Oromoon mirga ufii falmachuu, kabajaa ufii deeffachuu fi bilisummaa gonfachuuf baatii 8 dura eegale yeroo yerotti jajjabaataa, babal’ataa fi hidda lafa jala fageeffataa deemaa jira. Haaluma kanaan har’as Harargee magaaloto akka Awwadaay, Baddeessaa, Dadara, Hirnaa, Qobboo, Haramaayaa fi iddoo addaddatti mormii fi dallansuun ummataa cimatu dhaggeesifamaa oole. Sochii guyyaa har’aa taasifamaa jiru kana irratti, akkuma baratame, tankaarfii woraanni fudhateen dhiigni namoota hedduu dhangala’aa ooluu isaati kan ragaaleen gara garaa agarsiisan. Daa’imman osoo hin hafin kan rasaasni mootummaa Woyyaanee kuffisaa jirtu.
Godina kanatti hiriirri mormii sanbatas osoo addaan hin citin geggeeffame. Tankaarfii woraanni mootummaan bobbaase fudhateen Oromoon heddu miidhamaniiru. Guyyaa kaleessaa magaalaa Awwadaay qofatti dhukaasa woraanni ummata nagaa irratti duruunfatee baneen dhiigni nama hedduu dhangala’uu fi lubbuun bayuun hubatameera. Ta’us, tankaarfiin gara-jabeenyaa jumlaan ummata nagaa irratti fudhatme kuni ummata hin jilbiiffachiifne. Inumaa ummata daran dallansiise. Ummanni iddoo hundaa har’as akka hiriiruu dirqisiise. Hundi akka woliif birmatu taasie.
Ummata gaafii mirgaaf baye, isa ajjeefamuu fi hidhamuu dandamate, kan mudatu hidhaadha. Guyyaa har’aa jiraattonni Baddeessaa tankaarfii fudhataniin hidhamtoota heddu mana hidhaatii gadi lakkisiisan. Gochi gootummaa kuni wareegama dablataa isaan kaffalchiiseera, garuu.
Gama biraatiin, ummanni ajjeechaa fi hidhaan dallansiise tankaarfii qabeenya mootummaa ibiddaan barbadeessuu fudhataa jiraachuu isaati kan iddoo addaddaa irraa gabaafamutti jiru. Manniin kaabinee gandaa ummatatti woraana waamaniis gara cileetti geeddaramaa jira.
Torbee dabre keessa Arsii Lixaatti mormiin cimaan geggeeffamuun isaa kan yaadatamuudha.
Mormii baatii saddeetii oliif osoo addaan hin citin geggeesseen Oromoon godina hundaa ajjeechaa, hidhaa fi doorsisa sadarkaa ol’aanaa dandamatee qabsoo isaa asiin gaye. Ummata hadhaa gidiraa ganna 25 oliif dhadhamaa ture keessaa soda wanti jedhamu guutummatti haqamuun isaa qabsoon Oromoo boqonnaa haarawa seenuu isii dubbatu, taajjabdoonni. Ummanni qabsoo eegale irratti cichee itti fufnaan yeroon bilisummaan wolitti bayu hanga eeggamuu fi tilmaamamuu olitti kaluu ta’uu isaati kan hayyoonni siyaasaa baay’inaan dubbachutti jiran.
Previous articleJijjiirama hawwinu osoo hin argine qabsoo eegalle irraa duubatti jechuu hin qabnu
Next articleHiriirri mormii guddaan guutuu Oromiyaa keessatti Sanbata dhufu geggeeffamuuf